Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.3.1 Netflix Prize
I-Netflix Prize isebenzisa call evulekile ukuze ukubikezela ukuthi imaphi amabhayisikobho abantu azokuthanda.
I eyaziwa kahle kakhulu call ovulelekile iyona Netflix uMklomelo. Netflix inkampani eziqashisayo movie online, futhi ngo-2000 umkhankaso Cinematch, isevisi ukuncoma amabhayisikobho kumakhasimende. Ngokwesibonelo, Cinematch Ungase uphawule ukuthi wayethanda Star Wars Empire Strikes Back bese batusa ukuthi babukele Ukubuya Jedi. Ekuqaleni, Cinematch wasebenza kabi. Kodwa, phakathi neminyaka eminingi, Cinematch waqhubeka ukuthuthukisa ikhono layo kucombela kutsi amabhayisikobho amakhasimende uzothanda. Nokho, ngonyaka ka-2006, inqubekela Cinematch plateaued. Abacwaningi at Netflix wayezame konke pretty okuningi babekwazi ukucabanga, kodwa ngesikhathi esifanayo, asola ukuthi kwakukhona neminye imibono engase abasize ngcono uhlelo lwabo. Ngakho, benyuka nalokho kwaba, ngaleso sikhathi, ikhambi unokudlova: i call evulekile.
Lubalulekile ekuphumeleleni ekugcineni le Netflix uMklomelo kwaba kanjani ucingo evulekile yayiklanyelwe, futhi lokhu design has izifundo ezibalulekile kanjani izingcingo evulekile angasetshenziswa ucwaningo social. Netflix akazange nje wakhipha isicelo akusenjalo lamacebo, okuyikhona abantu abaningi bacabanga lapho siqale sicabangele ucingo evulekile. Kunalokho, Netflix kwakuyinkinga ecacile elula nokuhlola criteria: they wanika insayeya kubantu ukuba usebenzise iqoqo million 100 izilinganiso movie ukuba ukubikezela 3 million izilinganiso labetibambile-out (izilinganiso ukuthi abasebenzisi wayenze kodwa ukuthi Netflix akazange ukudedela). Noma ubani wayengase udale i algorithm ezingaholela ukubikezela izilinganiso million Kuboshwe 3-out 10% lingcono kunamafutha Cinematch ayihlanganyele 1 million dollars. Lokhu kucace futhi kulula ukusebenzisa nokuhlola criteria-Ngokuqhathanisa izilinganiso wabikezela labetibambile-out izilinganiso-kwakusho ukuthi Netflix Umklomelo kwaba ihlelwe ngendlela yokobana izixazululo kulula ukuhlola kuka ukukhiqiza; Kwabe sekuvela ukubhekana nenselelo yokwenza ngcono Cinematch ibe inkinga efanelekayo i call evulekile.
Ngo-October 2006, Netflix ezikhishwe kudathasethi equkethe million 100 izilinganiso movie mayelana mayelana 500,000 amakhasimende (sizocabangela yokwemfihlo kwalesi ukukhululwa idatha eSahlukweni 6). Idatha Netflix kungenziwa conceptualized njengoba matrix omkhulu okungukuthi cishe 500,000 amakhasimende amabhayisikobho 20,000. Ngaphansi kwalesi matrix, kwakukhona abantu abangaba yizigidi ezingu-100 izilinganiso ngezinga elingelikhulu ukusuka ku-1 kuya ku-5 izinkanyezi (Table 5.2). Inselele kwaba ukusebenzisa idatha nasemkhakheni matrix ukubikezela izilinganiso million Kuboshwe 3-out.
Ithebula 5.2: wokuhlelwa kwendikimba idatha kusuka Netflix uMklomelo. Netflix ezikhishwe mayelana million 100 izilinganiso (1 inkanyezi 5 izinkanyezi) olunikezwa 500,000 amakhasimende on amabhayisikobho 20,000. Umgomo we Netflix uMklomelo kwaba ukusebenzisa lezi izilinganiso ukubikezela izilinganiso aphethwe-out of movies 3 million, olukhonjiswa njengedifolthi "?". izilinganiso sona sabikezela ebese zilethwa abahlanganyeli Netflix uMklomelo base kuqhathaniswa izilinganiso labetibambile-out. Ngizoxoxa izimpikiswano ngokuphathelene nezimiso zokuziphatha ezungezile lokhu ukukhululwa idatha eSahlukweni 6.
Abacwaningi kanye kubaduni emhlabeni wonke abadonsekela le nselele, futhi ngo-2008 abantu abangaphezu kuka 30,000 babesebenza kulo (Thompson 2008) . Phakathi emncintiswaneni, Netflix bathola okungaphezu 40,000 nezixazululo ezihlongozwayo kusuka emaqenjini angaphezu kuka 5,000 (Netflix 2009) . Ngokusobala, Netflix ayengakwazi ukufunda futhi baqonde yonke lezi nezixazululo ezihlongozwayo. Nokho yonke into wagijima ngokushelela, ngoba izixazululo kwakulula ukuhlola. Netflix nje kuphela ikhompyutha qhathanisa izilinganiso wabikezela izilinganiso labetibambile-out by imethrikhi (metric oluthile ayevamise Wawuyini umsuka square yesiphambeko asho-lesikwele) pre-echaziwe. Kwakungenxa leli khono ukuze ngokushesha ahlaziye izixazululo esenza Netflix ukwamukela izixazululo kubo bonke, okwathi kamuva laba kubalulekile ngenxa yokuthi imibono emihle wafika evela kwezinye izindawo isimanga. Eqinisweni, ikhambi yokuwina sihanjiswe iqembu waqala ngokokukhetha kwabacwaningi ezintathu ayengenabo ngaphambi isipiliyoni yokwakha movie isincomo izinhlelo (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Esinye isici esihle Netflix uMklomelo wukuthi kwenza wonke umuntu emhlabeni ukuba babe isixazululo yabo esikalini kahle. Lapho abantu alayishiwe izilinganiso zabo abikezela, kwakungadingeki ukuba ulayishe ngemininingwane yabo academic, yazo, uhlanga, ubulili, ukuzikhethela akaya nabo ocansini, noma ngabe yini ngabo ngokwabo. Ngakho, izilinganiso ababikezela a uprofesa adumile Stanford babephathwa nse nalokho intombazane ekameleni lakhe. Ngeshwa, lokhu akulona iqiniso in ucwaningo iningi social. Okungukuthi, ngoba ucwaningo iningi social, nokuhlola kakhulu isikhathi esiningi futhi ingxenye yomzimba subjective. Ngakho, imibono iningi ucwaningo never esikalini sina, futhi lapho imibono Kuhlolwa, kunzima ukuhlukanisa labo okuhlaziya kusukela uMdali imibono. Ngenxa izixazululo kulula ukuhlola, izingcingo evulekile ukuvumela abacwaningi ukufinyelela zonke izixazululo okunamandla elimangalisayo ukuthi zizongena ngokusebenzisa imifantu uma nje kubhekwe izixazululo kusukela oprofesa odumile.
Ngokwesibonelo, ngesinye isikhathi phakathi Netflix uMklomelo umuntu enegama screen Simon Funk posted on Ukubloga isixazululo yakhe ohlongozwayo esekelwe a elisebunyeni value esibolile, indlela kusuka algebra eqondile engazange isetshenziswe ngaphambilini abanye abahlanganyeli. post blog Funk kwakungu kanyekanye yezobuchwepheshe kanye weirdly informal. Ingabe lesi post blog echaza ikhambi elihle noma kwakungabantu Saze sadlala ngesikhathi? Ngaphandle evulekile call project, ikhambi ukuze bangalokothi baye bathola nokuhlola izinto ngokungathí sina. Phela Simon Funk wayengekho onguprofesa Cal Tech noma MIT; wayengumuntu umthuthukisi isofthiwe ngubani, ngaleso sikhathi, kwaba Backpacking emhlabeni New Zealand (Piatetsky 2007) . Ukube wayesebenzise imeyilwa ngalombono unjiniyela Netflix, ngaso ngokuqinisekile kwakungeke Benziwe sina.
Ngenhlanhla, ngoba criteria nokuhlola yayicacile futhi kulula ukusebenzisa, izilinganiso bakhe ababikezela Kuhlolwe, futhi kwaba khona manjalo kucace ukuthi le ndlela yakhe waba namandla kakhulu: yena akukhishelwa endaweni yesine ku mncintiswano, umphumela okusika kulokho amanye amaqembu kakade wayesegule ukusebenza izinyanga inkinga. Ekugcineni, izingxenye ndlela kaSimoni Funk abesetshenziswa cishe yizo zonke izimbangi esingathí sina (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Iqiniso lokuthi uSimoni Funk wakhetha ukubhala iposi blog echaza indlela ayesingatha ngayo isimo, kunokuzama uyigcine imfihlo, futhi sibonisa ukuthi abahlanganyeli abaningi kule Netflix uMklomelo babengahlanganisiwe kuphela yizifiso umklomelo million dollar. Kunalokho, abahlanganyeli abaningi babebonakala bejabulela leyo nselele nabanengqondo futhi umphakathi ukuthi yayakha eduze inkinga (Thompson 2008) , imizwa yini ukuthi ngilindele ukuba abacwaningi abaningi ongakuqonda.
I-Netflix Prize iyisibonelo i call evulekile. Netflix umbuzo nge umgomo oqondile (ukubikezela izilinganiso movie) kanye azicelele izixazululo kubantu abaningi. Netflix wakwazi ukuhlola bonke lezi zixazululo ngoba babengabakwa kulula ukuqinisekisa kuka ukudala, futhi ekugcineni Netflix abelethwe ikhambi best. Okulandelayo, Ngizokukhombisa ukuthi le ndlela efanayo ingasetshenziswa eziphilayo kanye nomthetho.